トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ How kuziva mweya naye, vanhu vane chero Anotarira kunzwa?
Soul naye, izvo akati kunge chokuita mweya kubva rapfuura upenyu, mumwe nguva musangano iri kudzokorora kuberekwazve nguva zhinji, akavaka hwepedyo. Naizvozvo, zvichida kuti vanosangana munyika ino chaizvo, vamwe vanhu vave akavaka ukama hwakanaka kare asangana, zvichaita Vamwe vanhu kusangana kubvira zvino.
pamusoro ichi mweya naye, pane dzakawanda nzira kuudza iri. Kunzwa kuti kunoitika muna pachako kana uri nemunhu, zvinonzi kuva zvakakurumbira kuti vanhu ndakasangana muSeoul mudzimai. Uyezve, anogona kuonekwa kubva zvakadai utarisike uye unzwe.
kana ndakasangana nomweya mumwe, handidi kuti kurasikirwa Kusangana. In pano, tichakurukura, kusanganisira Anotarira vanonzwa sei kuziva mweya naye. In
kutarisa uye kuudza sei mweya naye kutarisa kubva mumhepo
, Chii Ivo uye sei kuziva mweya mumwe anogona kuoneka Anotarira kunzwa.
? Kutarira vakanzwisisa kuti
somuenzaniso, vaizova vanhu vakawanda vane rudzi kufarira Kutarira yake. Chinhu Kazhinji semamwe vanhu wayo chitarisiko. Asi noruremekedzo kuti mweya wako, unogona nguva dzose kutsvaka kazhinji kwete avo mhando. Vanhu chaizvoizvo kuti akasangana mweya naye, kunyange zvazvo akanga asina yangu mhando apo ndakasangana nguva yokutanga, ndinoti zvakanaka kuti kunge neimwe nzira kukwezvwa. In
, uti kana kusiyanisa mweya naye chitarisiko kuita, chinhu chiduku chikamu, asi ari kutungamirira dzidziso kuti vanhu vari chimiro kana choruoko, mumwe Chidembo, akadai anokwenya zvakafanana. Vanhu vakapedza iyoyo kubvira kare kare, akadai chiduku chikamu anouya rakafanana yepanyama. Vanhu kudana uye
mweya naye kuonekwa
? muchadenga saka kakawanda ndakati uye mhepo kwakafanana. Kana pane vadyidzani vaya vakadanwa saka kubva vanhu kumativi, chete pamwe ayo Vanhu nesimba mweya naye. A mweya naye, unhu uye tsika, nekuti iwe unoti kuti zvakawanda zvakafanana, akadai mafungiro uye kukurukura pamusoro aika, imi munoti kuti nemiwo kunotozongoita mhepo anouya zvakafanana.
nokuti nenzira iyi akafanana vanhu vaviri pane kazhinji yatovapo, vachaparidza mumwe sei kuzivisa soulmate uyewo nokuti ane mhepo kudzikamisa nei uye kuva pamwe chete. Vanhu vane mamiriro ezvinhu anogona kugara chaiwo mamiriro yavo vasina kunetseka yatovapo, zvingangoita soulmate.
The vanosangana pane ino kuti mweya wako kuti yave Meguria 'kakawanda
kuti vasangane mweya naye payo, inofanira kuva kukwezva mweya mumwe. Naizvozvo, kana hurumende iyo inongorira ane Aura yavo mweya, vachauya pedyo mwoyo kunyange mweya naye.
mweya Aura chinhu chiri chaibwinya paanenge chokwadi inopenya. Akadai basa uye mabasa aunofarira, kana muri vaneshungu pamusoro kushanda zvakaoma kubva manzwiro wechokwadi, mweya naye Kana vaicherechedza ungadai akazviratidza pamberi pemaziso.
Akadai kuravira, kana ukashanda nesimba kubva manzwiro vechokwadi kutsva chido, mweya naye Kana vaicherechedza ungadai akazviratidza pamberi pemaziso.